လူတိုင်းကို စေတနာ ထားပြီး ပိုက်ဆံချေး ပေးလိုက်တဲ့ လူတွေက ယခုနှစ်ကုန်ထိ အဆက်အသွယ်မလုပ် တာမို့ ပို့စ်တင်ကာရင်ဖွင့်လာတဲ့ ‘သိင်္ဂီထွန်း’ – Shwe Naung
လူတိုင်းကို စေတနာ ထားပြီး ပိုက်ဆံချေး ပေးလိုက်တဲ့ လူတွေက ယခုနှစ်ကုန်ထိ အဆက်အသွယ်မလုပ် တာမို့ ပို့စ်တင်ကာရင်ဖွင့်လာတဲ့ ‘သိင်္ဂီထွန်း’
တစ်ခေတ်တစ်ခါတစ်ချိန်တုန်း ကတည်းက အနုပညာ အလုပ်တွေကို တစိုက်မက်မက်ရုပ်ရှင် မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့’ သိင်္ဂီထွန်း’ ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
‘မသိင်္ဂီထွန်း’ရဲ့ အနုပညာ သက်တမ်းကလည်း ဆယ်စုနှစ် မကရှိနေပြီ ဖြစ်လို့ အားပေး ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်အများအပြားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။’သိင်္ဂီထွန်း’က လက်ရှိ အချိန်ထိလည်း အနုပညာ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပြီးတစ်ယောက်တည်း အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့့ ကြိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ ငွေးကြေးဥစ္စာ တွေကိုလည်း စည်းစနစ်တကျ စုဆောင်း တတ်ပါတယ်နော်။လူတိုင်းအပေါ်မှာ စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝစွာကူညီ ပေးတတ်တဲ့’ မသိင်္ဂီထွန်း ‘ကတော့ သူမကို အကူအညီလာ တောင်းလို့ ငွေးကြေးများစွာကို ချေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။‌စေတနာ ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ ပိုက်ဆံချေး ပေးလိုက်ပေမယ့် အဲ့ဒီလူတွေက အဆက်အသွယ် မလုပ်တော့ တာကြောင့် သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖွင့် ဟလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
‘သိင်္ဂီထွန်း’ကတော့”(2020)မှတ်တမ်း. ကျွန်မ အလိုမကျ ပူနေရတဲ့အကြောင်း. ရက်ပိုင်းလပိုင်းလေးပါပဲ အခက်ခဲရှိလို့ ပြောလွန်းလို့ အကူညီတောင်းလွန်းလို့ များစွာ သောငွေများကို အလွယ်တကူ ယူသွားကြတဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာရှိ လူကြီးမင်းများကို အဆက်သွယ် လည်းမရ ဖုန်းခေါ် လည်းမကိုင်. စာပို့လည်းမပြန်နဲ့.
ယခု ကာလ တစ်လျှောက် ကိုဗစ်နဲ့အတူ လွှင့်ပါသွား ကြပြီလားလို့ စိတ်ပူနေပါတယ် ဂုဏ်ကြီးရှင် တို့ရှင်.ကူညီရမယ်ဆို ပိုင်ဆိုင်မူရှိသမျှစွန့်ကူညီတတ်တဲ့ သဘော ကောင်းတဲ့ ကျွန်မကို အဖက်လုပ် ကြပါဦး ဂုဏ်ကြီးရှင်တို့..”ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲ..ဖတ်ရှုအားပေး သောချစ်ပရိသတ် လည်း သိင်္ဂီထွန်း ကိုကိုယ်ချင်စာမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
‘သိင်္ဂီထွန်း’ကတော့”(2020)မှတ်တမ်း. ကျွန်မ အလိုမကျ ပူနေရတဲ့အကြောင်း. ရက်ပိုင်းလပိုင်းလေးပါပဲ အခက်ခဲရှိလို့ ပြောလွန်းလို့ အကူညီတောင်းလွန်းလို့ များစွာ သောငွေများကို အလွယ်တကူ ယူသွားကြတဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာရှိ လူကြီးမင်းများကို အဆက်သွယ် လည်းမရ ဖုန်းခေါ် လည်းမကိုင်. စာပို့လည်းမပြန်နဲ့..
မောင် က ပြောတယ် Fb ပေါ်တက်ပြီး အလှုကြီး ပေး နေတာလားတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ….